Jaal Eda'o Boruu Encyclopedia Oromoo, Kitaaba Seena Oromiyaati.
Gorsa, Barsisaa, Qabsa’a, Hayuu fi saboona Oromoo walumagalati Qabeenya Oromoo fi Oromiyaati,
Jaal Eda’o Boruu Finfinneeti Dhalate kan gudate ta’ee garuu Afaan Oromoo qulqulu dubachun beekama, jeecha tokko Afaan Habasha itti make hin dubatu, Oromiyaa keessa bakka Adda Adda Hojeetera, Akkuma Qabsa’oota Oromoo Biro hidhame Qabsa’oota Oromoo waliin dararama argeera, Midha fi Dararama Habashoon Umata Gidugalessa Nannnoo Finfinne irrati raawatan tokko tokkon beeka. Nami kun barata seena miti, garuu Seena beeku qoofa utuu hin tane guyya guyyan nama seena baruu fi barsisu ture. Waan nama dhibu seena nama barbade gaafadhu akkakayuu torban siiti hima, yoo barbade seenama of keeti yoo gaafate sii caalaa deebise wayee kee siiti hima. Oromoo hunda akka Haadhoo isaati ilaala, Jalata, Kabaja, Orumummaa isaa birrati kabaja qaba.
USSR fi East Europe keessati Oromo nationalism, saboonuma, seena fi Afaan Oromoo akka gudatu, Amala Waraaqa fi jaaluma East Europe keessati nama bu'uuresedha. Oromoo ani Habasha dha akka ofiin hin jeene, Oromoo University hunda irra adeemun gurmeese leenjisu, seena barsisu, isaa rakkate gargaru, isaa biyya dhufu simachu, isaa biyya galu gegesu, isaa baqatu haala mijeesu fi West Europeti akka simatan qindeesun ijoole Oromoo USSR turanf Abbaa ture. Ini Gudaan Jaal Eda'o Boruu hanga lubun isaa dabartuti nama Ganduma fi Amanta Leelisuu irra bilisa ta'e jirate du'e dha. Nama Amala Waraaqa Qabuu fi Nama Waraaqisati Amanu dha.
Tokkumaa Oromoo fi Bilisummaa uumata Oromoo kan amanu, Buqa'iinsa umata Oromoo nannoo finfinnee akka falmanuuf seena fi ragga nannoo finfinee nu gumachun, gorsa fi jajabina qabsa'ota Oromoof goocha ture. Eda'o Mana Kitaaba Oromooti, Barsisa dhugati, nami Eda'on gorse fi leenjise yoomi ilee garntu hin ta'u. Ida'o Wayee Qabeenya fi Wayee fayyida dhunfa guyya tokko yaade hin beeku, Seena Qabsa'oota, Waraaqitoota wayee qabsoo bilisummaa fi walabummaa barsisu fi gurmeesu male feedhi Ango fi Fayyida ykn uftuluma hin qabu. Jaal Eda’o Boruu Hayuu dhuga Oromoo beeku dhuga akka jirtuti dubatu, seena Oromoo fi Oromiyaa qoofa utuu hin tane seena Gootota Oromoo hunda ni beeka, qabsa’oota Oromoo jalala fi Kabaja guda qaba, keesumati Seena Obbo Baroo Tumsa Bareesuuf qoophe fi feedhi akka qabu seena isaa isa dhuga bareesuf qoophi ta’uu isaa ibsa ture yeeroo dhiyoo keessa.
Jaal Eda'o Boruu USA jirata kan turan fi ji'a murasaf dhukubsatan guyya Hara Addoolesa 18, 2017 Adunya kana irra kan booqotan yamu ta'uu Abba Waraa fi Abba Ijoolee Sadti. Jaal Koo Biyoon Siiti Haasalphatu.
Wayee Obbo Eda'o Boruu jeechan ittin Ibsuu hin qabu, danda'ee ilee ibsuu hin danda'uu. Waari Seena Balinan Bareesa.
Maatiin, Jaaloon, Hiriyoon isaa fi Oromoon hundi Jajajabina Isiinf Haakeenu Jeena.